बी एण्ड बी हस्पिटल र प्रदीपमान वैध कालोसूचीमा | Real Khabar
बी एण्ड बी हस्पिटल र प्रदीपमान वैध कालोसूचीमा
१८ साउन, काठमाडौ । बी एण्ड बी हस्पिटलका प्रवद्र्धकद्वय जगदीशलाल वैद्य र अशोककुमार बाँस्कोटा तथा उद्योगी प्रदीपमान वैध बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेपछि कालोसूचीमा परेका छन् । बी एण्ड बी हरिसिद्धि मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पिटल खोल्नका लागि नबिल बैंक लिमिटेडबाट लिएको ऋण नतिरेपछि उनीहरु कालोसूचीमा परेका हुन् ।
उक्त कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरले २० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो तर कर्जा लिएको लामो समय भइसक्दा पनि वैद्यले हालसम्म सावाँब्याजवापत ६ करोड मात्र तिरेको र बाँकी १४ करोड रुपैयाँ तिर्ने विषयमा तदारुकता नदेखाएपछि कालोसूचीमा राख्न लगाएको नबिल बैंक स्रोतले बताएको छ । नबिल बैंकको आग्रहमा कर्जा सूचना केन्द्रले सोमबारदेखि उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
यसबाहेक प्रदीपमान वैद्यको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको विजयदीप इन्भेष्टमेन्ट कम्पलीलाई पनि कालोसूचीमा राखेको केन्द्रले बताएको छ । कालोसूचीमा पर्ने निश्चित भएपछि उनलाई हालै सम्पन्न सेञ्चुरी बैंकको साधारणसभाले अध्यक्षबाट हटाएको थियो । सो बैंकका संस्थापक अध्यक्ष प्रदीपमान वैद्य बैंकका मुख्य प्रमोटर हुन् । नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका वैद्यले एनबी गु्रपसँग मिलेर लगानी गरेका हुन् ।
एनबी समूहद्वारा प्रवद्र्धित हरिसिद्धि इँटा कारखानाको जग्गा लिएर बी एण्ड बी हस्पिटल र प्रदीपमान वैध मिलेर उक्त कलेज खोज्ने तयारी गरेका थिए तर एनबी समूहले आफूहरुलाई फसाएको दाबी बी एण्ड बी अस्पतालले जनाएको छ । उक्त कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने क्रममा बाबुकाजी श्रेष्ठ, नविन श्रेष्ठ र प्रभुकेसर प्रधान पनि कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरु मुख्य प्रवद्र्धकका नातेदार हुन् ।
जुत्ताको सोलमा अवैध १७ किलो सुन भेटियो
सुनको मुल्य फेरी १२०० ले घट्यो
अनुदान नपाएर घाटा भएको भन्दै रात्रिबस बन्द हुने
दैनिक ४० किलो सुनको तस्करी !
पेट्रोलियमको वार्ता मिलेन
क्रान्तिकारीका उम्मेदवारका कुरा कुन कुन क्याम्पसमा को को उठ्दै?
अस्पतालको आइसियुमै चर्को दलाली
राजधानी दैनिकमा आन्दोलन
पक्राउ नै नगरि पाँच डनविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी
Harke Haldar, 19 May 2013
पानीदेखि जोगिनै परयोः
पाकिस्तानमा महिला नेतृको हत्या